Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo
Ny "Google map"(sarintany ao amin'ny internety) angamba no fainpiasantsika indrindra ao amin'ny findaintsika. Maro amintsika no tsy mahatsiaro izay nataontsika talohan'ny nisian'ny fanoroan-dalana amin'ny "GPS" ao anaty finday. Mety ho sahiran-tsaina isika raha handeha any amin'ny toerana tsy mbola nalehantsika mihitsy, saingy rehefa nisy "Google map" ao amin'ny findaintsika dia mandeha amin-toky isika ary mahita lalana any amin'ny tanana izay tsy mbola hitantsika hatrizay. Azo raisina ho sary maneho ny karazam-pitsaharana tian'Andriamanitra homena antsika ao amin'ny faminaniana araka ny filaharany ve izany?
Misy fotoana anefa mety ho diso ny toerana soratantsika ao amin'ny finday, na koa mety manapa-kevitra ny tsy hanaraka ny torolalany isika satria mahita lala-manivaka. Ao amin'ireo toe-javatra roa ireo, dia mety ho tonga any amin'ny toerana izay tsy nirintsika andehanana akory isika - ary azo antoka fa tsy hanana fitonian-tsaina koa.
Vakio ny Fil. 4:4-6. Inona no ambaran'i Paoly amintsika momba ny fomba hananana fitsaharana sy fiadanana tena izy, na dia eto amin'ny tontolo feno fahoriana sy tebiteby aza?
Tsy manambara i Paoly ao amin'io andalan-teny io fa tokony hifaly mandrakariva ao amin'ny fizahan-toetra atrehinao ianao; tsy izany, fa hoy izy hoe: "Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo". Na inona na inona toe-javatra sy fitsapana atrehintsika ankehitriny, raha mitoetra ao amin'Andriamanitra isika, ao amin'ny fahatsarany sy ny fitiavany, ary ao amin'ny sorona nataony ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana, dia afaka mifaly ao Aminy ary hahita fiadanana ny fanahintsika izay reraka.
Na ny lantompeon'ireo andalan-teny ireo aza dia efa mitory fiadanana sy fitsaharana ary fanantenana fara tampony ny amin'ny zava-misy ankoatra izao tontolo izao.
Alaivo sary an-tsaina ny fitsaharana ananan'ny fanahintsika raha toa tsy misy na inona na inona mampitebiteby antsika. Toa tsy azo eritreretina ny hisian'izany eto amin'ity tontolo ity (na i Paoly aza dia nitebiteby tamin-javatra maro), fantatsika anefa fa mifehy ny toe-javatra Andriamanitra ary hamonjy antsika Izy ka hitondra antsika any amin'ny fanjakany, hanampy antsika hijery ny toe-javatra mampitebiteby araka ny tokony ho izy.
"Efa mby akaiky ny Tompo"? Izany hoe, akaiky antsika mandrakariva Izy, ary raha vao mikipy ny masontsika ka mandry ao amin'ny torimasom-pahafatesana isika, dia ny fiverenan'i Kristy no zavatra hitantsika aorian'izay.
Eny tokoa, feno zava-manahirana ny fiainana, feno fitsapana sy tolona, ary tsy misy afa-miala amin'izany isika rehetra. Azo antoka fa tsy afa-niala tamin'Izany koa ny apôstôly Paoly (jereo ny 2 Kôr. 11). Tiany hasongadina amintsika anefa fa na dia eo aza ny zava-tsarotra iaretantsika ankehitriny, dia azontsika atao ny mifaly amin'izay nomena antsika ao amin'i Kristy, ary azontsika atao ny hahita fiadanana ho an'ny fanahintsika na dia amin'izao andro izao aza.
Avereno vakina ny Fil. 4:4-6. Fomba ahoana no hahafahanao mampihatra ireo teny mahafinaritra ireo eo amin'ny fanandramanao ankehitriny, na inona na inona fitsapana sy fahoriana atrehinao?